Xildhibaan Caynaba kasoo baxay Oo ka hadlay xaalada Laascaanood iyo kuwii Laascaanood kasoo baxay Oo ka aamusan. | Yool News
Hargeysa(Yool)-Xildhibaan Axmed/Khaliif Jaamac Saalax oo lagasoo doortay gobolka Sool golaha wakiladda Somaliland ayaa su’aal galiyay dilalka masuuliyiinta ee Laascaanood kusoo noq-noqda cidda fulisa ???
“Muddo 41 cisho gudahood ah ayaa laba Masuul lagu dilay magalada #Laascaanood gudaheeda, Labadaas Masuul oo mid xildhibaan ahaa midna Gudomiyihii Komishanka Qaranka ee Gobolka Sool .
Su’aasha iswaydiinta leh ayaa ah ee ilaa hada Caqligeygu qaadan waayay ayaa ah In Magaalada Oog ilaa Tukaraq waxaa jooga 12 kun oo askari oo Milatary ah waa 80% Ciidankii Qaranka Jamhuuriyada somaliland ,Hada Ogow ciidankii Police ka iyo Sirdoon ka kuma jiro tiradaasi.
Cidii wax dishana aan lasoo qaban sharcigana lagu ciqaabin .”